Fanadiovana ny asan’ny Fitsarana – Tsy mamindra fo amin’ireo tsimatimanota ny ministra vaovao RANDRIANASOLO Jacques- Ao raha du 23 février 2019 | NEXTHOPE RANARISON Tsilavo Corruption de la justice à Madagascar
Corruption MadagascarFanadiovana ny asan'ny Fitsarana - Tsy mamindra fo...
Corruption MadagascarLutte contre la corruption à MadagascarNEXTHOPERANARISON TsilavoRANDRIANASOLO Jacques
Hihaza an’ireo trondro vaventy. Nahitsy sy hentitra ny minisitry ny Fitsarana, Randrianasofo Jacques, raha niresaka ny fomba hoentiny manadio ny tontolon ny asan’ny Fitsarana. Nambarany fa: « tsy hisy famindram-po » eo amin’ny dingana hotanterahan’ny Fitsarana amin’ny ady amin’ny kolikoly.
« Hiady amin’ny tsimatimanota isika. Ny madinika hatrany no tratra farany hatramin’izay. Havaditsika amin’izay ny raharaha amin’izao fotoana izao, ary hoenjehina koa ireo lehibe manao kolikoly », hoy ny minisitra mpitana ny Fitombokasem-panjakana ,omaly, taorian’ny fihanihanana nataon’ireo Tonian’ny mpampanoa lalàna eo anivon’ireo rafi­pitsarana a mbony miisa efatra teny amin’ny Fitsarana tampony, teny Anosy.
Mahatsapa ny minisitra ny Fitsarana vaovao fa « mampihisatra ny fampandrosoana tokony hisy eto Madagasikara izany ». « Mihemotra ireo mpamatsy vola raha mbola manjaka eto amintsika ny kolikol « , hoy hatrany izy.Juliano Randrianja
Previous articleLe Pôle anti-corruption de Madagascar attend la mise en place d’une cour criminelle ordinaire – Les nouvelles du 23 février 2019
Next articleMinistre de la Justice Jacques Randrianasolo – Priorité des priorités, la lutte contre la corruption – Midi madagasikara du 23 février 2019